राजनीति – Page 180 – MeroJilla.com
बेडमा लडेका बेला ममाथि आक्रमण भयो–ओली Monday, June 9th, 2014
काठमाडौं, जेठ २६ गते । नेकपा एमालेको आसन्न महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार केपी शर्मा ओलीले आफू बेडमा लडेर उपचार गराइरहेका बेला एमाले नेता माधव नेपालले आफूमाथि आक्रमण गरेको बताएका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता तथा प्रखर वक्ता ओलीले घाममा तङ्रिएर बसेका आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भने–महाभारत कालमा समेत युद्दको सामान्य सिद्दान्तको पालना हुन्थ्यो, अहिले त्यसलाई..
राजधानीमा केपी ओलीको शक्ति प्रदर्शन !
काठमाण्डौं, जेठ २६ गते । नवौं महाधिवेशन मिति नजिकिंदै गर्दा एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली पक्षले सोमबार राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ । ओली पक्षले सोमबार अपराह्न भृकुटी मण्डपमा कार्यकर्ता भेला गरी शक्ति प्रदर्शनसहित उम्मेदवारी घोषणा गर्न लागेको हो । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले भने यसअघि नै सभागृहमा शक्ति प्रदर्शनसहित उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको छ ।..
रकमान्तरमा बिधी र प्रक्रिया पुगेको छ-सिँह Sunday, June 8th, 2014
रकामान्तरमा बिधी पुयाईएको छ सिँह बिराट नगर जेठ २५ गते । संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकाश मन्त्रि एवं उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले चालु अवस्थामा रहेका विकास निर्माणका कामलाइ पूर्णता दिन विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर वजेट रकमान्तर गरेको बताएका छन् ।उनले यस विषयमा विवाद नर्गन प्रतिपक्षी दलहरुलाइ आग्रह गरेका छन् । प्रेस युनियन मोरंगले विराटनगरमा आज विहान गरेको पत्रकार..
अबरुद्ध संसद आजबाट सुचारु हुने
काठमाण्डौ जेठ २५ गते । केहिदिन देखी अबरुद्ध ब्यबस्थापिका संसदको बैठक आजबाट सुचारु हुने भएको छ । एमाओवादीलगायतका अन्य दलका कारण लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको व्यवस्थापिका संसदको बैठक आज सञ्चालन हुने भएको हो।शनिबार तिन दलको बैठकमा भएको सहमती अनुसार संसद सूचारु हुने भएको हो । दलहरुबीच मधेसवादीदलहरुलाई पनि समेटेर उच्चस्तरीय राजनीकि समिति गठन गर्ने सहमति भएपछि संसदको अवरोध..
अवको दश वर्ष बिकासको युग ःउपसभापति पौडेल Saturday, June 7th, 2014
कपिल ज्ञवाली बुटवल,जेठ, २४ गते । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले अवको दश वर्षलाई बिकासको युगका रुपमा लिएर कृषि तथा औद्योगिक बिकासमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण मुलुकको बिकास हुन नसकेको औंल्याउदै आर्थिक बिकासका लागि कृषि र औद्योगिक क्रान्ति आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।अबको १० वर्षमा कृषि क्रान्ति तथा औद्योगिक..
नेतालाई पनि बाँकी छाड्दिन –लोकमान
काठमाडौं, जेठ २४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफूले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि नछाड्ने चेतावनी दिएका छन् । राजधानीमा शनिबार भएको एक कार्यक्रममा उनले नेताहरुका अकुत सम्पत्तिबारे छानबिन भइरहेको बताए । जनस्तरबाट बारम्बार नेताहरुलाई कहिले समाउने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै कार्कीले प्रमाण भेटिए कसैलाई नछाड्ने स्पष्ट गरे..
ऋषी कट्टेललाई ८ जना नेताले छोडे
काठमाण्डौ जेठ २४ गते । ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका आठ जना केन्द्रीय नेताहरुले पार्टी छोडेका छन् । पोलिटब्यूरो सदस्य कृष्ण राना र आङ छिरिङ शेर्पा तथा केन्द्रीय सदस्य केदार गिरी, गुरु दाहाल, कृष्ण शर्मा, विष्णु अधिकारी, नाम्गेल मोक्तान र तिलक न्यौपानेले पार्टी परित्या गर्नुभएको छ । आफूहरुले पार्टी छोडेको र सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा मालेमा प्रवेश गर्ने..
माधव नेपालले बागी र दागीलाई आश्रय दिए
काठमाण्डौ जेठ २४ गते । नेकपा एमालेमा महाधिवेशनको मुखमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेका बेला माधव नेपालमाथि बागी र दागीलाई आश्रय दिएको थप आरोप लागेको छ । नेपालले मंसिर ४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार हराउन लागेका र कारवाहीमा परेकालाई आश्रय दिएको आरोप केपी ओली पक्षले लगाएको हो । नेपाल पक्षले केही दिनअघि बुद्धनगरस्थित क्लालिटी बैंक्वेटमा आयाजना गरेको..
एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज पनि बस्दै
काठमाण्डौ जेठ २४ गते। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि बस्दै छ । दिउँसो १ बजेपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा बस्ने बैठकमा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान संशोधनका विषयमा छलफल हुने सचिव युवराज ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।विधानको मस्यौदा सदस्यहरूलाई वितरण गरिसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । विधान संशोधनमा प्रस्तावना, झन्डा र सपथ ग्रहणको भाषा परिमार्जनको..
पार्टी फुटको हल्ला निराधार -भट्टराई
मनिषा अवस्थी । काठमाण्डौ, जेठ २४ गते । एकिकृत नेकपा मओबादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी फुटको हल्ला निराधार रहेको बताएका छन् । गएराती समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । भट्टराईले अरु पार्टीले फुटको हल्ला चलाएर पार्टी नै कब्जा गर्ने छट्टु स्यालजस्तै रणनीति अपनाएको आरोप लगाए । नेता भट्टराईले वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक कार्यदिशाको..
चीनबाट फर्किए प्रधानमन्त्री Friday, June 6th, 2014
काठमाडौं, जेठ २३ गते । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नो प्रथम चीन भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन् । कोइराला केहीबेर अघि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेका हुन् । उनी चीनको कुन्मिङमा भएको दोस्रो दक्षिण एशसया एक्स्प्रोको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन बिहीबार चीन गएका थिए । कोइरालालाई चीनले एक्स्प्रोमा सहभागी हुनका लागि विशेष विमान पठाएको थियो । उनको चीनमा..